Liban, Mivarotra Rivotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2008 21:57 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español, عربي, English
Misy tranga iray ity mety (na tsia) mampiseho izay mety hampiasan'ny Libaney ny talentany amin'ny hevitra tsy dia mahazatra hahazoana vola sy hampisehoana ny “fitiavan-tanindrazana”. Ramatoa Rasha Najjar no nahita ny hevitra hoe angonina amin'ny tavoahangy ny rivotra ary alefa any ivelany. Novokarina ary ny “rivotra avy any Liban” voatahiry ao anaty tavoahangy ary nalefa tany ivelany hamidry amin'ireo zanaka ampielezana Libaney. Haingana dia haingana ireo mpitoraka blaogy ao amin'ny Stuff Lebanese People Like sy Ramblings of a Lebanese Hopeful nitantara ity hadalana ity.
Nampiseho horonan-tsary misy dokambarotry ny tavoahangy vy “Hawa Lebnan” [Rivotra Libaney] i Tri-Klop, ary nanoratra hoe :
Tia mividy sy mivarotra izao rehetra izao ny Libaney. Mino izy ireo fa mifandray amin'ireo mpivarotra Poenician nonina an-dranomasina taloha. Noho izany, ankoatra ny fialam-boliny – mihinana rivotra (sarin-teny natao ho an'ireo miteny Libaney), dia tia mivarotra rivotra koa ny Libaney. Nahomby ny fanangonana rivotra Libaney – Hawa Lebnan – tamin'ny tavoahangy sy ny fanondranana azy. Misy ny fitomboky ny Ministeran'ny Toekarena sy ny Varotra ao Liban moa ny tavoahangy.
Etsy andanin'izany, nanoratra i Antoun fa manana talenta sy sahy mampiasa vola tahaka ny olona hafa ihany ny Libaney :
Misy namako iray ao amin'ny eBay nilaza fa te hivarotra ny zavatra rehetra ao amin'ny eBay ny sinoa, “na ny reniny aza” raha mety ny vidiiny.
Ny azoko avaly izao dia manana talenta ary sahy mampiasa vola toy ny olona rehetra ny Libaney. Ny tsy hitovian'ny Sinoa sy ny Libaney kosa dia ny sinoa manaraka ny varotra ataony, na farafaharatsiny hovoarainao ny entana nandoavanao vola. Ny Libaney kosa dia hanandrana ny hevitra rehetra hanambatambazany ny mpividy, hangalany vola betsaka amin'izy ireo, nefa mbola ho afaka mandresy lahatra azy ihany amin'ny ady varotra nataony.
Ohatra mivaingana : Ny rivotra Libaney atao anaty tavoahangy. Milaza i Rasha Najja, ilay vehivavy toy ny adala nahita io hevitra io fa tsy fitadiavam-bola io fa fitiavan-tanindrazana.